‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा भिडेकी घर बनाउने काम गर्ने एलिना मिडियामा, सबैलाई चकित पार्ने स्वर (भिडियो हे’र्नुहोस)
Homeसमाचार‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा भिडेकी घर बनाउने काम गर्ने एलिना मिडियामा, सबैलाई चकित पार्ने स्वर (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 19, 2021 admin समाचार 4997
निकै नै सुम’धुर स्वरकी धनी १७ बर्षकी खोटाङकी चेली एलिना उदा’स घर बनाउने ठा’उँमा काम गर्छिन् । इट्टा , बालुवा बो’क्छिन्, गाह्रो लाउँछिन् । एलिनाको आ:वाज निकै नै मिठो छ । परिवारमा बृद्ध बुवा आमा छन्, उनीहरुलाई पाल्न’का लागि एलिना दिन’रात मेहेनत गर्छिन् र बाँकी रहेको समयमा सँ’गीत सिक्छिन् । काम गरिरहँदा अरुले हेपेको तितो अनुभव र चोट पटक लागेको अ’नुभव पनि एलिनासँग छ ।
पछिल्लो समय चर्चि’त रियालिटी शो ‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा पनि छानिएकी एलिनाको एउटै सप’ना छ, ठुलो गायिका बन्ने र आमा बुवालाई बुढे’शकालमा राम्रोसँग पाल्ने । परि’वारमा ५ छोरीहरु छन्, एलिना र उनकी बहि’नीको बिहे हुन बाँकी छ । एलिना बुझ’की छिन् । धेरैले उनको आवा’ज मेलिना राईसँग मिल्छ भन्छन् तर एलिना रचना रिमा_लको ठुलो फ्यान हुन् ।
भ्वाइृस अफ नेपा’लमा उनले जोडी ढु’कुर एकै साथ नहुँदा गीत गाएर २ जना कोच’हरुलाई फर्काइन् र सबैको मन जि’तिन् । एलिनाको आमा पनि सेटमा आ’एकी थिईन्, आमा छोरीको माया र एलि’नाको परिवार प्रतिको उत्तर’दायित्व देखेर सबैको मन रोयो । एलिना उ’दास आफुले काठमाडौंमा धेरै घर बनाए’को बताउँछिन् । आफुले बना’एको घरहरु आफ्नै जस्तो लाग्छ, एलिनाले मन’छुने कुरा गरिन् । आमा बुवाको लागि आफ्नै एउटा घर ब’नाउने उनको सपना छ । इताजा खबरबाट
हे भगवान ! तान्त्रिकले देखाए अहिले सम्मको अ’चम्म लाग्दो जादु (भिडियो सहित)
बि’बादमा मु’छिएका नायक किशोर खतिवडाद्वारा आ’त्म’ह’त्या प्रयास ,,,भिडियो हे’र्नुहोस
नन्दको जिम्मा हामी लिन्नौं भन्दै गंगा की भाउजु मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस्)
September 6, 2020 admin समाचार 14954
सुर्खे’तमा अहिले केही दिन यता एउटा सोच्नै नसक्ने घटना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक स’ञ्जाल युट्युव सञ्चा’लकहरुको भिड सुर्खेतमा लागेको छ । २४ वर्षीया गंगा विकले आफ्नो जेठाजुको छोरासंगको सम्बन्ध’मा बच्चा जन्मा’एको दावी गर्दै युट्युवमा सार्वजनिक भएपछि
कुन उमेरको मान्छेले कति घण्टा सुत्नुपर्छ ? बिस्तृत रुपमा हेर्नुहोस्
November 1, 2020 admin समाचार 9998
मानिसको उमेरका हि’सावले निद्राको आवश्य’कता पर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरि’काको राष्ट्रिय निद्रा फाउण्डे’शनले गरेको अनुस’न्धानमा जनाइए अनुसार विभिन्न उमेरका मानि’सहरुको निद्राको आवश्य’कता पनि फरक हुने गर्छ । तपाईंले कति घण्टा सुत्नु
झापामा केटाले केटालाई नै बिबाह गरेपछि गाउँलेहरु भन्छन्: ‘यिनीहरुले कसरी नानी जन्माउलान् ?(भिडियो सहित)
December 16, 2020 admin समाचार 8005
झापामा झण्डै एक हप्ता प’हिले केटाले केटासंगै बिहे गरेको समाचार बा’हीरिएको थियो । तामांग केटाले क्षेत्री के’टासंग बिहे गरे भन्ने समाचार सोशल मिडि’यामा निकै चर्चाको समा’चार बन्यो । कतिले त्यस्लाई सहजै स्वी’कार गरे भने कतिले